Dhallinyaro Tartan xifdinta Qur’aanka uga qeyb galay Kuwait oo shahaadooyin la guddoonsiiyay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dhallinyaro Tartan xifdinta Qur’aanka uga qeyb galay Kuwait oo shahaadooyin la guddoonsiiyay
Dhallinyaro Tartan xifdinta Qur’aanka uga qeyb galay Kuwait oo shahaadooyin la guddoonsiiyay
Safiirka Soomaaliya ee dalka Kuwait Danjire Cabdulqaadir Amiin Sheekh ayaa munaasibad casho iyo sagootin ah ugu sameeyay xarunta safaaradda Wiilal Soomaaliyeed oo tartan Quraan xifdin ah oo la qabto sanadkiiba mar uga qayb galay wadanka Kuwait.
Dhallinyarada Soomaalida ah ee ka qayb galay tartanka isla markaana kaalimo muhiim ah ka galay ayaa waxaa ay kala ahaayeen
1:Axmed Burhaan Maxamed oo Soomaalida Mareykanka ka socday
2:Cabdirisaaq Geedi Xaashi oo Soomaaliya ka socdey
3:Cumar Maxamed Mukhtaar oo isna matalayay Soomaalida Norway ku dhaqan.
Munaasibada ayaa waxaa goob joog ka ahaa Safiirka Soomaaliya ee dalka Kuwait, Qunsulka, mas’uuliyiin iyo culimaa’udiin Soomaaliyeed, kuwaasi oo dhamaantood u muujiyay farxad dhallinyaradaas .
Munaasabadda waxaa ka hadlley Madaxa Culimada Soomaalida ee Kuwait Sheekh Maxamuud Xaji wuxuuna ka warbixiyey tartanka ay ka qayb galeen kaalimaha ay kalla gallen iyo guusha ay u soohoyeen guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed, isagoo baraarujiyay dhallinta tartanka ka qayb gashay .
Qunsulka Safaarada Soomaaliya ee Kuwait Mudane Abiib Muusa Faarax ayaa dhankiisa bogaadiyey guusha ay u soo hoyeen wiilashaani bulshada Soomaaliyeed, wuxuuna sheegay inay tahay mid taariikhda u gashay.
Safiirka safaaradda Soomaaliya ee Kuwait Danjire Cabdiqaadir Amiin Sheekh oo xafladda ka hadlay ayaa sheegay in guusha ay u soo hooyatay dhamaan Ummadda Soomaaliyeed, wuxuuna ku amaanay dedaalka balaaran ee ay sameeyeen.
Mudane Cabdiqaadir Amiin Sheekh iyo mas’uuliyiinta kale ee safaaradda ayaa Shahaadooyin guddoonsiiyay dhallinyarada tartanka ka qayb galay, waxaana ka qayb galay tartankaan quraan aqriska ah culimo ka kala socotay ilaa 63 dal oo dunida ah.
Previous articleWasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo shir caalami ah uga qeybgalay dalka Mareykanka
Next articleLIVE uga daawo goor dhow SNTV barnaamijka TEDx Muqdisho